आइटम अस्त्र - मनोरञ्जन - नेपाल
फिल्म प्रचारका लागि उपयोगी
लुट २ को ‘ठमेल बजार...’मा आइटम डान्स गर्नु पहिल्यै एलिसा राईले पाँच दर्जन म्युजिक भिडियोमा मोडलिङ गरिसकेकी थिइन्, उनी अभिनीत सर्ट फिल्मकै संख्या १५ नाघिसकेको थियो । चर्चा भने शून्य । स्टेज सोका लागि पत्याउनेको पनि खडेरी थियो । तर, ‘ठमेल बजार...’ले एलिसालाई रातारात ‘हटकेक’ बनायो । उनले छोटा पहिरनमा कामुक नृत्य गरेको यो गीतले यूट् युबमा १ करोड ३७ लाख भ्युज बटुलिसकेको छ । यसको दर्जनौँ कभर भिडियो यूट्युबमा अपलोड भएका छन् । त्यसो त एलिसालाई मात्र होइन, लुट २ कै लागि एक्कासि प्रचार कमाउन श्रेयस्कर साबित भयो यो आइटम गीत ।
माला लिम्बूले हिरोइनकै रूपमा डेब्यु गरेकी थिइन्, वान वेबाट । तर, अढाई वर्षअघि यो फिल्म रिलिज हुँदाभन्दा अहिले एउटै आइटम गीतले मालालाई मालामाल बनाएको छ । गीत हो, ‘काले दाइ...’ । पर्व फिल्ममा समाविष्ट यो गीत यूट्युबमा दुई महिनामा ७६ लाख पटक हेरिसकिएको छ । कतिसम्म भने पर्वका निर्देशक दिनेश राउतले सुटिङको सुरुआत नै यही गीतबाट गरेका थिए । उनको चाह थियो, मालाले निश्चल बस्नेतसँग कम्मर मर्काएको यस गीतले फिल्मलाई प्रतीक्षित बनाओस् । आखिर भइदियो पनि त्यस्तै ।
फिल्म प्रचारका लागि ट्रेलरभन्दा गीत फलदायी हुन्छ । त्यसमा पनि फास्ट बिट र कामुकता झल्कने गीत त सबभन्दा उपयोगी । ‘ठमेल बजार...’हरूले यही प्रमाणित गरे । र, यसको प्रभाव पनि देखा परिसकेको छ, अचेल हरेक फिल्ममा आइटम गीत अनिवार्यजस्तै राख्न थालिएको छ । त्यसै पनि देखासिकीमा रम्ने प्रवृत्ति छ हामीकहाँ, त्यसमाथि आइटम त भाइरल पनि भइरहेका छन् । अनि, आइटमको लहर छाउनु नौलो भयो र ? ‘काले दाइ...’सहित आधा दर्जन आइटम गीतका नृत्य निर्देशक कविराज गहतराज भन्छन्, “फिल्म भन्नासाथ ग्ल्यामरसँग जोडेर हेरिन्छ । अनि, ग्ल्यामर पस्कन आइटम डान्स उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले कथाभन्दा बजारको माग अनुसार आइटम राख्न थालिएको छ ।” नाच्ने र नचाउने दुवैका लागि यस्ता गीत ‘ विन–विन सिचुयसन’ हुने गरेको छ ।
जसरी कथा र कथा भन्ने शैलीमा हामीलाई बलिउडले थिचेको छ, ठीक उसै गरी आइटम गीत पनि बलिउडकै प्रभावको प्रतिफल हो । नेपालमा जति पनि आइटम गीत हुन्छन्, तिनका शब्द, ड्ेरस, डान्स स्टेप, सेट सबै बलिउडकै नक्कल हुन्छ । उतैबाट भित्र्याइएकाले यस्तो असर पर्नु सामान्य मान्छन् नृत्य निर्देशकहरू । नेपाली फिल्ममा आइटमको लहर चलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको लुटको ‘उध्रेको चोली...’ कोरियोग्राफर गम्भीर विष्टका अनुसार आइटम नम्बर भन्नासाथ दर्शक छोटो लुगामा ठुम्काहरू प्रयोग गरेर केटीलाई बारमा नचाएको कल्पना गर्छन् । केटा लोभ्याउने वा जवानीको उन्माद भाव बुझाउने शब्दहरू हुन्छन् । गीतको बिट पनि फास्ट र डान्सिङ हुन्छन् । विष्ट भन्छन्, “बलिउडमा जस्तो हुन्छ, हामीकहाँ त्यसैको अनुसरण मात्र हो । नेपाली टिपिकल आइटम गीत र डान्स भन्ने नै छैन ।” आइटम गीत आयातीत त हो तर फिल्म प्रचारको दायरा फराकिलो बनाउन भूमिका खेल्ने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने धेरैको तर्क छ ।
आइटमप्रेम कतिसम्म बढेको छ भने ‘ उध्रेको चोली...’मा सुष्मा कार्कीले कम्मर हल्लाउँदा कुरा काट्ने नायिकाहरू अहिले आफैँ आइटम डान्स गर्न मरिहत्ते गर्छन् । त्यति मात्र होइन, कतिपय स्थापित नायिकाहरू समेत आइटम डान्समा उदार हुन थालेका छन् । कतिपय अवस्थामा आइटम गर्लको चर्चा नायिकाको भन्दा ज्यादा भइदिन्छ । जस्तो : एलिसाले लुट २ मा हिरोइन ऋचा शर्मालाई छायामा पारिन्, भलै एलिसाले छोटो भूमिका पनि निर्वाह गरेकी छन् । पर्वकी मुख्य नायिका नम्रता श्रेष्ठलाई ओझेलमा पारेकी छन् मालाले । फिल्म रातो घर टाइप गरेर गुगलमा सर्च गर्दा मालालाई नै फिचरिङ गरिएको ‘ झकास झापाली...’ बोलको आइटम गीत पहिलो नम्बरमा देखाउँछ । मालाको अनुभव भन्छ, “आइटमले छोटो समयमा ठूलो मासमा चिनाउँदो रहेछ ।”
शकुन्तला फिल्मकी लिडिङ लेडी थिइन्, अनु शाह । नम्रता सापकोटाचाहिँ ‘कोही छ...’ गीतमा आइटम गर्लका रूपमा सीमित । तर, ‘हाइप’ अनुले होइन, नम्रताले ज्यादा पाइन् । जबकि, आइटमका लागि प्रस्ताव आउँदा सुरुमा नम्रता गरूँ कि नगरूँ भन्ने दोधारमा थिइन्, छवि बिग्रेलाकी भन्ने डरले । तर, अहिले भन्छिन्, “लोकप्रियता कमाउन र दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न आइटम डान्स उपयोगी हुँदो रहेछ । त्यसैले अरू फिल्ममा पनि आइटम गर्ने तयारीमा छु ।” शालीन भूमिकाबाट दर्शकको मन जितेकी नायिका नन्दिता केसी पनि आइटमबाट अछूतो रहन सकिनन् । जंगबहादुरको कोटमा समाविष्ट ‘आई निड योर लभ बेबी...’ शीर्षकको आइटम गीतमा कामुक नृत्य गरेकी थिइन् उनले ।
त्यस्तै, पूर्वमिस नेपाल मलिना जोशीले हिरोइनका रूपमा फिल्मी यात्रा सुरु गर्नु पहिल्यै कलिउडको ‘नशा हो यो...’मा ग्ल्यामरस नृत्य गरेकी थिइन् । नेपाली शाकिराको पहिचान बनाएकी गायिका इन्दिरा जोशी फन्कोको ‘लोकल ब्युटी...’मा आइटम गर्लका रूपमा फिचरिङ भइन् । फिल्म राहदानीको ‘गुन्यु चोलो...’मा हिरोइन रीमा विश्वकर्माको आइटम डान्स देख्न पाइन्थ्यो ।
देशविदेशमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम, अवार्ड समारोहमा नृत्य पस्कन हिरोइन होइन, कुनै न कुनै फिल्ममा आइटम डान्स गरेकाहरूको बढी माग छ । किनभने, त्यस्ता सोहरूमा हिरोइनभन्दा आइटम गर्लको छवि बढी बिकाउ हुन्छ । रेखा थापाले कुनै समय मेरो एउटा साथी छको ‘पैसामा बिक्दैन...’मा आइटम डान्स गर्नुपछाडिको एउटा बलियो कारण यो पनि हो । नत्र आफ्नो दबदबा रहेको उक्त समयमा रेखालाई आइटम गर्नु आवश्यक थिएन । अहिले नायिका प्रियंका कार्कीले करिब त्यस्तै झल्को दिइरहेकी छन् ।
फिल्म संख्या र व्यस्ततालाई आधार मान्ने हो भने प्रियंका यो समयकी नम्बर वान नायिका हुन् । तर, उनको आइटम मोह कुनै संघर्षरत नायिकाको भन्दा कम्ती छैन । चैत दोस्रो साता उनले फिल्म तिम्रो मेरो प्रेम कहानीको ‘पियार घुमाइदेऊ पोखरा..’मा कामुक नृत्य गरिन् । उनको अभिनयसमेत रहेको फिल्म लाल्टिनमा त दुईवटा आइटम गीत छन्, जसमध्ये ‘ ब्लास्ट हुनेवाला जवानी...’ले यूट्युबमा १४ लाख भ्युज पाइसकेको छ भने सोही फिल्मको ‘ चमेली...’को भिडियो रिलिज हुन बाँकी छ । यसअगाडि उनले हँसियामा ‘आजको रातमा...’ र कलिउडको ‘म हुँ काली...’ भन्ने गीतमा कामुकता पोखेकी थिइन् । अर्की स्थापित नायिका नम्रता श्रेष्ठले अधकट्टीको ‘हे नम्रता...’ गीतमा केटाहरूको माझ घेरिएर आइटम डान्स गरिन् ।
थिएटर पृष्ठभूमिकी मेनुका प्रधान जीवन्त अभिनय गर्ने अभिनेत्रीका रूपमा परिचित थिइन् तर उनले पनि आइटमलाई बेवास्ता गर्न सकिनन् । टलकजंग भर्सेज टुल्केको ‘ नाच न मैया...’बाट काफी चर्चा कमाएपछि भैरवको ‘गोली ढाईं ढाईं चले...’मा ठुम्का देखाइन् । अर्चना डेलालले त आइटम गर्लकै पहिचान बनाइसकेकी छन् । ढुवानीको ‘छलक छलक...’बाट सुरु भएको उनको आइटम यात्रा दमदारको ‘जिकज्याक जवानी...’ हुँदै आवेगको ‘कोही तिम्लाई हीरा भन्छन्...’सम्म आइपुगेको छ । रमाइलो त के भने यी तीनै फिल्मका हिरोइनभन्दा अर्चनाको बढी हल्ला भयो बजारमा । रिया श्रेष्ठ हिरोइनका रूपमा खेलेको फिल्म द रिटर्न हिरो आए/गएको पत्तै भएन तर श्री ५ अम्बरेको ‘नाच्ने नचाउने...’ र बिरानो मायाको ‘चिउँडोको कोठी...’ गीतले स्टेज सोमा माग बढायो । भलै केही समय अगाडि मलेसियामा उत्ताउलो नृत्य देखाएपछि उनी चौतर्फी आलोचनाको सिकार भइन् । कतिसम्म भने देशप्रेमको भावनाले ओतप्रोत भएको भनिएको फिल्म मेरो देशमा समेत ‘डन्ट टच मी...’ भन्ने आइटम गीतमा दिप्ना थापा र एलिजा प्रधानलाई नचाइयो ।
आखिर आइटममा के त्यस्तो जादू छ र ? कलाकारदेखि फिल्ममेकरसम्म मरिहत्ते गर्दै छन् । “छिट्टो दर्शकमाझ पुग्न र फिल्मबारे जानकारी दिन आइटम जति सशक्त अस्त्र अरू छैन,” आफू निर्देशित तीनै फिल्म लुट, टलकजंग भर्सेज टुल्के र लुट २ मा आइटम गीत राखेका निर्देशक निश्चल बस्नेत भन्छन्, “त्यसो हुँदा कथाले नमाग्दा पनि कहिलेकाहीँ घुसाउनैपर्छ ।” माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विषय उठान गरिएको टलकजंग भर्सेज टुल्केमा आवश्यक नहुँदा पनि प्रचारप्रसारकै खातिर जबर्जस्ती आइटम गीत राखेको उनले स्वीकारे । उनी छायांकनका क्रममा रहेको फिल्म दुई रुपियाँको आइटम गीत ‘ढल ढल जवानी...’मा पनि नाच्दै छन् ।
त्यसो त प्रचारमा मात्र होइन, सुरुआती व्यापार उकास्नसमेत आइटम डान्स दरिलो हतियार बनिरहेको छ । त्यसैले बजारको आयतन बढाउन आइटमको सहारा लिनु पक्का पनि अनुपयुक्त होइन । आखिर फिल्म ‘सो–बिज’ न पर्‍यो तर दर्शक लोभ्याउने होडमा छाडा शब्द, उत्तेजक हाउभाउ र भड्किलो शैली अपनाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै बढेको छ । अर्कातिर आइटम भन्नासाथ बारमै नचाउनुपर्ने, रक्सीकै प्रयोग गर्नुपर्ने र जवानीकै कुरा गर्नुपर्ने बलिउड ह् याङबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । त्यसैले आइटममा पनि मौलिकता र कलात्मकता खोज्नुपर्ने आवश्यकता औलाउँछन्, नृत्य निर्देशक गम्भीर । भन्छन्, “जसरी कथा र कथा भन्ने शैलीमा हामी बलिउडबाट पर हट्दै छौँ, त्यसै गरी आइटम गीतको शब्द, नृत्यकला, पहिरन र बाजागाजामा नेपालीपनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”
‘उध्रेको चोली...’ले लुटतिर सबैको ध्यान आकृष्ट मात्र गरेन, सुष्मा कार्कीको व्यस्तता ह्वात्तै बढाइदियो । ठमेलको डान्सबारमा खिचिएको उक्त गीतमा सुष्माले छोटा कपडामा निकै कामुकता पोखेकी छन्, त्यो पनि सौगात मल्ल, दयाहाङ राई, कर्मजस्ता गिनेचुनेका हिरोलाई आफूसँगै नचाएर । गीतमा मात्र नभई सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि हट अवतारमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सुष्माको माग ह्वात्तै बढ्यो । त्यसैले लुटपछिको आइटम गीतको बाढीको पहिलो फाइदा उनैलाई भयो ।
बिन्दास, बिन्दास २, मिसन खेलाडी, राजनीति, नेपथ्यलगायतका फिल्ममा आइटम गर्लका रूपमा फिचरिङ भइन् । एउटै गीतबाट दुई लाख रुपियाँसम्म पारिश्रमिक माग्न थालिन् । देश/विदेशमा हुने स्टेज सोबाट त्यत्तिकै अफर आउन थाल्यो तर विडम्बना ! आफ्नो ‘क्रेज’ बचाउन सुष्मा पूर्णत: असफल भइन् । विभिन्न व्यक्तिगत र व्यावसायिक लफडाले झन्–झन् ओरालो लाग्दै गइन् । आइटमको लहर चलेको यो समयमा समेत सुष्माको अत्तोपत्तो छैन । न त कुनै फिल्ममेकरले उनलाई नचाउन नै चाहेको देखिन्छ ।